Olee otu esi eme ka onwe gi nwere ihe omuma na sAS?
M Kwesịrị Inyocha Onwe M dị ka SAS Programmer?
Ị na-eme atụmatụ ịkwaga ọrụ ọhụrụnwere ụgwọ dị elu na ohere ka mma? Ị nwere ike ịjụ nkà nkwurịta okwu na ndu ndúbido n'elu. Ma nchọpụta kachasị na nso nso a, na-ekwu na: SAS dị ugbu a dịkankà kachasị mma.
Enweghị obi abụọ, na-agafere SASnyocha ga-eme ka ihe dị mfe - max extra karoto. Ma n'eziokwu, ọbụna nkwalite banyere SAS guzodị oke mkpa maka nchịkọta, dịka Java dị maka mmemme. Ulo oru ubochi nke ugbua emeela ka SAS di mkpadị ukwuu, ọbụna maka ndị ọkachamara ahụ, bụ ndị nwere ezigbo ihe ọmụma dị egwu. Ọmụmaatụ,ugwo ugwo nke onye nyocha ndi isi ahia nke United States biaruru ihe ruru $ 100,000,agafe ihe dị ka 20% na afọ ọ bụla nke ahụmahụ. Ya mere, ego nwere ike inweta nanchịkọta nke nchịkọta oge a bụ n'ezie elu karịa atụmatụ ụlọ ọrụ nke ọrụ ọ bụla ọzọ.
Gịnị bụ SAS?
SAS na-atụ aro na Statistical Analysis System(ma ọ bụ usoro ngwanrọ), nke e mepụtara ruo n'afọ 1960 iji mee nchọpụta nchịkọta ihe ubin'ihi na ịgha mkpụrụ dị elu. N'oge a, ndị na-eme ihe nkiri na-emeso SAS gụnyere itinye usoro ngwọta,na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche n'ọtụtụ ụlọ ọrụ maka nchọpụta ahụ na ego, nchọpụta data,nhazi ihe omuma, akuko, amuma, wdg.N'ịkọpụta ihe nchoputa nke nchịkọta akụkọ site na eserese, SAS na-enye data dịka PDF, RTF na HTMLfaịlụ. E nwekwara ọtụtụ nyiwe nke kwekọrọ na asụsụ SAS, gụnyere Microsoft kachasịWindows, Linux, yana UNIX ọzọ, na ọbụna na-ekenye kọmputa.
N'ihi nke a, ndị ọkachamara niile, si Bill Gatesna CEO nke MWI obere ụlọ ọrụ dị ka Semalt , agaghị eleghara mkpa SAS anya.
Iji nyefee ngwọta ha,ihe mmemme SAS na-adabere na ngwanrọ software ahụ nke Statistical mepụtaraNyocha System System. Ha na-arụ ọrụ dịgasị iche iche nke data dị iche iche, na-emekarịmkpa maka nchịkwa ihe ize ndụ, ịrụ ọrụ azụmahịa, ọrụ nlekọta ndị ọrụ, yanadị ka nchekwa, ego ego, ọgụgụ isi ndị ahịa na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ịbụ Szer Programmer: Gịnị Dị Ka?
Ndị na-eme ihe nkiri SAS na-enwekarị ihe dị ukwuu na ndị nyochatinye aka na nnyocha nyocha. Ndị otu ọkachamara SAS na-edozi ịrụ ọrụ n'ọfịs, dịkana-aga njem mgbe ụfọdụ iji zute ndị ahịa ma ọ bụ na-apụ apụ iji nweta ozi dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Na nso nso a, ngwa maka SAS nwere ngwa ngwaagabiga ụwa dum, ebe ọ bụ na ọ ghọrọ ihe kachasị ike na-eji-pụtara kpuchie maka kacha mmanjikwa nyocha site na njikwa njikwa ya na ezi akuko akuko. Ọ bụ ya mere SASonye na-eme ihe omume na-etinyekarị aka na nrụgide nke ọrụ ụbọchị ọ bụla, dị kamaka ọrụ ndị kachasị mkpa ha na-eche ihu mgbe niile.
Ọ Na - esiri Freshers Ike?
Ọrụ nyochaa ugbu a na-esi ikeọrụ nhazi, karịsịa maka ịmepụta ndị ahịa azụmahịa achọrọ maka ndị ọrụ kachasị elu.Nyere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla chọrọ ugbu a ka o jide n'aka na ọ bụ naanị ihe ngwọta nke data, nke zuru ụwa ọnụA na-atụ anya nchịkọta maka mgbasawanye ọzọ n'ime afọ 3-5 na-esonụ. Ọ bụ ya mere ị na-aga SASna-aghọ nnukwu ihe ndabere maka ịbanye na ụlọ ọrụ ahụ. Otú ọ dị, dị ka ọkachamara ọkachamara kwurunke ndị mmepe nke Semalt, ị ka nwere ogologo ụzọ ị ga - esi aga.
N'ezie, usoro SAS ọkachamara bụn'etiti asụsụ ndị kachasị mfe ịmụta, bụrụ ndị kwesịrị ekwesị maka ndị nwerela isiihe ọmụma nke C / C ++. N'otu oge ahụ, SAS na-enye nnukwu ohere maka freshers, n'ihi ọdụmòkè nke ụlọ akụ, ụlọ ọrụ ego, na ụlọ ọrụ ahụike na-akwado ya maka ijikọta nanchekwa data dị iche, na-eme nchịkọta na ọgụgụ isi azụmahịa. Ihe bụ, asụsụ n'onwe yaachọghị ihe omuma ma ọ bụ nkà ọ bụla dị na mmemme. Ọ bụrụ na ị raara onwe gị nye logicsma ọ bụ na ị na-eche ịme nyocha ma mụta n'otu oge ahụ, mgbe ị na-emeso SAS ekwesịghịgosi oke ike. Ọzọkwa, ị nweere onwe gị ịhọrọ usoro kachasị mma site na ịme gịnhọrọ dị n'etiti ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na ngwanrọ.
Ihe mbụ a ga-eme site na freshersna-etinye uche na isi SAS. Na-eme nke a, otu ga-enweta nghọta mbụ banyereọnụ ọgụgụ, nke ga-adị mkpa iji mụọ Usoro Ntuzi Ụtọ. Mgbe nke ahụ mechara,ozugbo ị banyere n'ụgbọelu, ị ga-enwe ike ịchọta anya gị ọzọihe omumu na nyocha nke uzo. Iji jide n'aka na ogo gị bụ mgbe niilena-eto eto, ị ga-enwe usoro ọhụụ na echiche ọhụrụ iji chọpụta..Ọ bụ ya kpatara yaeche echiche ugboro abụọ tutu ịmalite ịmụ SAS, ọbụlagodi na ị na - eche banyere okwu a.
Ọ dị mma ka a chọrọ SAS?
Ọbụna na-eche na n'adịghị ka isi mmaliteederede, SAS bụ software a ikikere, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị mmemme na-ka na-achọ, n'ihi na:
Ikwenye zuru oke na n'ozuzuụkpụrụ iwu, na iguzogide ihe ọ bụla ọzọ gbasara nchekwa, taa SAS ghọrọ ọbụna ihe dị mkpa karịmaka nchekwa data karịa mgbe ọ bụla
Usoro SAS egosilaya nnukwu Data data na ezigbo ike maka SAS JMP, nakwa dị ka nyocha nyocha
Na-erite uru site na nke kachasị mmanjikarịcha, SAS dị irè karị iji tinye data nyocha ya n'ime uru ndị a na-enweta site naego na ụlọ akụ na ụzụ
Olee otú a ga - esi nweta ụgwọ ọrụ maka sistema SAS gị?
Ugbu a, e nwere mmeri asọmpimpaghara nile nke SAS, malite na isi ihe, ruo nyocha nke kachasị elu. Ka o sina dị, e nwereọtụtụ ohere na-akwụghachi ụgwọ bara uru mgbalị gị. Iji kwusi ezigbo ọrụ na ụlọ ọrụ, ịkwesighimara ihe niile. Ihe ị chọrọ n'ezie bụ ịmara ụfọdụ nkà na ụzụ ụfọdụogo, nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọ.
Mana otu esi eme ka ezigbo ọrụ gịihe ngosi dị n'elu ndị asọmpi? Kedu ihe a ga-eme iji nweta ụgwọ ọrụ kacha mma ma na-emesapụ akaonye ọrụ? E nwere ohere karịa ka ọ dị. Dịka ọmụmaatụ, Semalt nwere ọkachamarandị ahịa na ndị ọkachamara n'ịkwalite weebụ na-enyere gị aka ịbawanye ohere ị ga-arụ ọrụna-enye gị nkà ozugbo na ndị na-ege ntị SAS n'isi ndị ụwa. Ọka mmirinwere ahụmahụ inyere ndị ọkachamara SAS aka ịkwalite ọrụ ha n'imepeeji nke ọdịda ma ọ bụ ihe ngosi ,nke na-eme ka ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ nweta ọrụ.
Dị ka ọkachamara si kwuo,nke a bụ ihe kacha mma maka usoro mmemme iji gosipụta nkà na ịga n'ihu ndị ọzọ na-asọ asọ.
Isi ihe bụ na mmemme SASdị n'etiti ọrụ ndị a na-arụ ọrụ ugbua nke kachasị mma. Ị na-eche echiche nke ọma?Ịchọrọ ịkọtara ahụmahụ kachasị dị nro nke gị (dịka ezigbo nkwụsị nsogbu, nkwurịta okwuna ike ịkụziri ya ihe, yana ọrụ nhazi na nkà na ụzụ)? Ihe niile ị chọrọbụ ịkpụpụta kapeeti na-acha uhie uhie na-asị nabatara. Ozugbo a na-anụ gị na Web, nandị na-arụ ọrụ n'elu ụwa ga-amalite ịsọ asọmpi site na iji arịrịọ ha kachasị mmana-akwụ ụgwọ ụgwọ maka otu nzube - iji rite uru site n'inweta nkà gị na azụmahịa ha.Ọ ga-abụ naanị gị, nke nhọrọ ị tụlere. Cheta, ahụmahụ SAS dị ugbu aabụghị ihe dị oké ọnụ ahịa maka naanị idebe ya maka ụbọchị ọbụla!